8Yar (အိပ်ယာ): April 2012
ဒီနေ့ တိမ်တွေမှာ အရောင်တွေပါတယ်
ဒီနေ့ စိတ်တွေမှာ အရောင်တွေပါတယ်
ဒီနေ့ စကားတွေမှာ အကာတွေပါတယ်
ဒီနေ့ မျက်ရည်တွေမှာ အတ္တ္တတွေပါတယ်
မြင်နေပေမယ့် ယုံလိုက်မိရင် သေသွားနိုင်တယ်...။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်တော်များ ဖူးမျှော်ခွင့်သတင်း
သတင်းကောင်းလေးပါးပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်တော်များဖူးခွင့်ရတုန်း စာဖတ်သူများကိုရော၊ ဘလော့ဂ်မောင်နှမတွေကိုပါ ဖူးစေချင်ပါလို့ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်္ကာပူ) အဖွဲ့ကလည်း ဓာတ်တော်များ စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် တရားစခန်းယောဂီများအတွက် ဝေယျာဝစ္စများကိုပါဝင် ကုသိုလ်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အောက်က Post လေးကို http://mettashinfoundationsg.blogspot.com ကကူးယူလာကြောင်းပါခင်ဗျာ။ 8Yar
လေးစားအပ်ပါသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စဉ် အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်တော်များဖြစ်ကြသော
ဆရာတော်ကြီး၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို (၇) ရက်တိုင်တိုင် ပူဇော်ပွဲနှင့် မန္တလေးမြို့
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်္ဂလာရိပ်သာ ဌာနချုပ်မှ နာယကချုပ်ဆရာတော်ဖြစ်သော အရှင် ဣန္ဒက
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ (၇)ရက် အထူးတရားစခန်းပွဲကို မေလ (၁)ရက်မှ (၇)ရက်နေ့ အထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်အသိပေး နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ထူးကဲလှစွာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကြွချီလာတော်မူသော
ဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲ နှင့် (၇)ရက် တရားစခန်းပွဲတွင် ကျွန်တော်များ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ (၂)ရက် မေလ ၂၀၁၂တွင် အခြားဓမ္မအဖွဲ့များနှင့်
စုပေါင်း၍ နေ့လည်ပိုင်း ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်အားလည်းကောင်း၊ (၄)ရက် မေလ ၂၀၁၂တွင် တရားစခန်းယောဂီများအတွက် တစ်နေ့တာ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်၊ ဓာတ်တော်များ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ရေး ကုသိုလ် နှင့် လာရောက်ဖူးမျှော်ပူဇော်သူများအား အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အစရှိသည့် လုပ်အားကုသိုလ် အစုစုတို့ကို ပါဝင်အားဖြည့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ညနေတရားပွဲများကိုလည်း မေလ (၁)ရက်၊ (၅)ရက် နှင့် (၆)ရက် တို့၏ ညနေ ၆:၃၀
မှ ၈:၀၀ အထိ Function Room 1, Arina Country Club, Joo Koon တွင် ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားစခန်းဝင်လိုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အမည်
အီးမေလ်းလိပ်စာများကို မနီလာအောင် (၉၆၉၉ ၄၇၉၅)၊ လမ်းပြသူ (၆၃၃၆ ၅၉၄၉)၊ (nilaaung63@gmail.com)
ကိုအောင်နိုင် (၉၂၂၇ ၇၄၉၁)၊ dhammadownload (၉၇၃၆၅၀၃၄)၊
ကိုထင်ကျော် (၉၄၂၄ ၂၉၆၁)
မသွယ်သွယ်စိုး (၉၃၅၁ ၆၄၃၉)
ကိုထိန်လင်း (၉၀၆၈ ၇၀၁၉)
ကိုခိုင်ဇော်လင်း (၈၁၈၀ ၀၇၇၆)
တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါကြောင်း လေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။
လှူဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် ဒေါ်နီလာအောင် (၉၆၉၉ ၄၇၉၅)၊ nilaaung63@gmail.com (POS Saving account 189-11107-0) အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ထဲ့ဝင်၍လည်းလှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်္ကာပူ) အဖွဲ့
'ငါ' ကင်းတဲ့ တရားသံကို....
13rd Apr 2012
သင်္ကြန်ဆုတောင်းနဲ့ သင်္ကြန် Song
ကြွရောက်လာကြတဲ့ စာဖတ်သူများနဲ့ Blog မောင်နှများအား ကျွန်တော် အိပ်ယာမှ ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ် အတာသင်္ကြန်ဖြစ်ပါစေ.... လို့ဆုမွန်ပြုရင်း သင်္ကြန်ရေပက်ဖြန်းလိုက်ပါသည်။ ဗွမ်း ဗွမ်း ဗွမ်း ဗွမ်း !!!!
သင်္ကြန်သီချင်းလေး နားဆင်ရင်းပျော်ရွှင်စွာကကြပါကုန်။ :P
ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပိုင်း မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်ကာပူ) အတွက်အလုပ်တွေကူနေရလို့ ကိုယ့် Blog လေးကိုလည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တင် အလုပ်ရှုပ်ယုံမကဘူး။ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Candy ကိုပါအလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်။ ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေလဲဆိုတော့ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်ကာပူ) အတွက် Blog လေးလုပ်ပေးနေလို့ပါ။ ဟောဒီမှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ အိပ်ယာက မီဒီယာပိုင်းမှာ တာဝန်ယူထားတော့ မီဒီယာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကူရတာပေါ့။ ဟီး ဟီး.. :P ပြောသာပြောရတယ်။ တကယ်တန်း ဒိုင်ခံလုပ်သွားတာက Candy နဲ့ ကိုကြည်ဇော် တို့က Blog ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်း၊ ကင်မရာမန်း ကိုဇော်မင်းထွန်းက ကျွန်တော်ရဲ့ ပီပြင်လှတဲ့ ပဲပင်ပေါက် လက်ရေးတွေကို ပြူးပြဲဖတ်ပြီး မြန်မာစာရိုက်ပေး၊ မလှိုင်ဝင်းလဲ့က အလှူရှင်စာရင်းတွေ အသေအချာပြုစုရင်း တရားမှတ်၊ ကျွန်တော်တို့ အကိုကြီး ကိုအောင်ဝင်းထွဋ်ကလည်း လိုအပ်တာတွေကို ဖုံးနဲ့မှာစား.. အဲလေ... မှာကြား ရှာပါတယ်။
နေ့လည်တစ်နာရီ လောက်က စလုပ်လိုက်တာ လေးနာရီလောက်လည်းရောက်ရော ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်အစ်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဉာဏ် တစ်ယောက် အသုပ်လေး နှစ်ထုပ်ဆွဲရောက်လာကာ အရက်နဲ့ မြည်းလေသတည်း.. အဲလေ... လက်ဖက်ရည်နဲ့ မြီးလေသတည်း။ :P ဒီကြားထဲ သူ့မှာ ရန်ကုန်က ချစ်ဇနီးဆီဖုံးဆက်လို့ မရလို့ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတာများ.. စကားပြောနေရင်းတောင် အဝေးငေးငေးကြည့်တာ... တစ်ခါ တစ်ခါ ကြည့်ရင် နာရီဝက်လောက်ကြာတယ်။ မနည်းလှုပ်လှုပ်ပြီး သတိပေးရတယ်။ သူ့ ကြည့်ပြီး ကိုယ်တောင် အော်ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ ဂယ်ပဲ... ဟိ ဟိ :P
ဒါနဲ့အိပ်ယာ တစ်ယောက် အဲဒီတုန်းက ဘာလုပ်သတုန်း ဆိုတော့။ သူတို့ကိုဘေးကနေ ယက်ခပ်ပေး၊ ရေနွေးငှဲ့ပေးနဲ့ တစ်နေကုန်တာပါပဲ။ ခစ်ခစ်.. :P Candy အကြောင်းတော့ရေးတော့ပါဝူး၊ ရေးရင် သူက သားအကြောင်းပြန်ရေးမှာဂျ။ ဟီး ဟီး... :P အဲ့ဒီနေ့က တကယ်ကို တတ်ညီ၊ လက်ညီ လုပ်ကြတာ၊ ည ၈ နာရီလောက်မှ ပြန်ကြတယ်။ မပြန်လို့လည်းမရဘူး။ ဖုံးတွေက တဂွမ်ဂွမ်မြည်နေကြပြီလေ... အိမ်သူ သက်ထားတွေက အခုပြန်မလာရင် ဒီညကင်းတဲမှာသွားအိပ်ပေတော့လို့... ဆိုလေတော့ စင်ကာပူမှာ ကင်းတဲမရှိတာကြောင့် ပြန်အိပ်ဖို့ ပြင်ကြရတာပေါ့။ ဒါတောင် ကိုဉာဏ်က လူပျိုတွေနေခဲ့ကွာ... ဆိုပြီး သူကနေမလို့ လုပ်သေးတယ်။ ဟတ် ဟတ်.. :D :D ဒါမျိုး အိပ်ယာကို စမ်းလို့ဘယ်ရမလဲ... ကိုဉာဏ်နော် အစ်မမရှိတုန်း လူပျိုလုပ်မလို့လား?? လို့ တစ်ခွန်းပဲမေးလိုက်တယ် တန်းပြန်သွားပါလေရော။ ဟီး ဟီး ဟီး.... :D :D :D ကဲ စိတ်လေးတွေ ရွှင်သွားပြီဆိုရင် အောက်က အလှူရှင်စာရင်းလေးကြည့်ပြီး သာဓု ခေါ်သွားကြပါခင်ဗျာ။
3rd Apr 2012 ထိစုစုပေါင်း လှူတန်းငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ 5872 ရရှိပါကြောင်းပါခင်ဗျာ။ အလှူရှင်စာရင်း အစအဆုံးကို မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်ကာပူ) ဆိုဒ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်ကာပူ) Blog လေးအတွက် လုပ်အားဒါနလုပ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ မောင်နှမ အားလုံးကို ဤနေရာမှ လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း အိပ်ယာပြောပါရစေ..။ ဤဒါနကုသိုလ် အပေါင်းတို့ကို နတ်၊ လူ သာဓု ခေါ်စေသောဝ်.....
၂၀၁၂ ခုနှစ် Sembawang
သင်္ကြန်အတွက် မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း(စကာင်္ပူ) နှင့် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းမှု
(သား) ကျော်ဇင်ထွဋ် 50
(သမီး) ဖြိုးရတနာကျော် 30
ဦးအေးကိုကိုစိုးနှင့် M.T Theresa Tiga မှ သင်္ဘောသားအားလုံး ကောင်းမှု
Mr Wan Khin Jimmy Wang + မအေးမာအောင် 20
Lim Kim Song + မခင်ခင်စိုး
ကွယ်လွန်သူ သမီးလေး မယ်မဒီဘို အား ရည်းစူး၍ ကိုဇင်ဘိုဘိုစိုး
+ မခိုင်မာလွင် (သမီး- ယွန်းသီရိခင်)
+မစုစုဖြိုး (သား- ဥာဏ်ဟိန်းထက်)
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းစင်္ကာပူ အဖွဲ့မှ သာဓု သာဓု သာဓု.... ခေါ်ဆိုရင်း အလှူရှင်များအားလုံး ယခုဘဝမှာပင် ရေလို အေးမြ ကြည်လင်ကာ ရေအကျိုး(၁၀)ပါး မတောင်းပဲပြည့်စုံပြီး နိဗ္ဗာန်သို့ လွယ်ကူ၊ လျှင်မြန်စွာ ရနိုင်၊ ရောက်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါသည်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဝင် ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများကိုလည်း ကျွန်တော် မှ ရိုသေစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပါရစေ။ စာဖတ်သူအပေါင်းလည်း ဝမ်းမြောက်၊ ဝမ်းသာ သာဓုအနုမောဓနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်တော်များ ဖူးမျှော်ခွ...